Bullet maTatoo, muunganidzwa wemagadzirirwo uye zvinoreva | Kunyora
Bullet nyora uye zvadzinoreva zvinotsanangurwa
Antonio Fdez | | Zvinhu uye zvinhu nyora
Wati wamboona kufarirwa kwemabara matattoos uye mamwe magadzirirwo anoenderana nechinhu ichi? Chokwadi ndechekuti zvakaringana kugadzira mhinduro yakapfava muinjini yedu yekutsvaga kuti tione huwandu hukuru hwemabara mataturo atinogona kuwana pamambure. Chiratidzo chisina kujeka chatiri kutarisana nacho a mhando yetatoo inozivikanwa chaizvo uye iri kudiwa.
Zvino, Zvinorevei kuti mabara matattoo ane chii? Ivo vane imwe mhando yechiratidzo chakakosha? Kana kuti ingori bara here? Zvakanaka, ngatipindei mune zvakadzama. Ichokwadi ndechekuti mabara matatto anokwanisa kuve nezvakawanda zvinoreva izvo zvinopfuura mhirizhonga kana mhosva. Vanogona zvakare kuve nehukama nenyika yekuvhima. Kana iwe uri fan wenyika yekuvhima inogona kuve yakanakisa sarudzo.
Mabara anogona zvakare kushandiswa kumiririra rudo rwekunyengera. Semuenzaniso, dhizaini inoratidza bara rinopfuura nepamoyo. Ikozvino, iwe unoda here kushandura ayo akanyanya kukosha chiratidzo kutenderera? Unogona kugara uchienda kune dhizaini yebhokisi kana bara rakatyoka kuratidza kuti hondo yapera.
Kufunga kuita a tattoo zvine chekuita nemabara? Tinokukoka iwe kuti utarise iyo bullet tattoo gallery pazasi. Isu takaita sarudzo izere yemagadzirirwo emhando dzakasiyana. Kune iwo emhando dzakasiyana, mhando uye chimiro. Kunyangwe matato emuromo ari kuruma bara nenzira yakati wandei zvakajairika. Zvine musoro, tiri kutaura nezvemiromo nemeno emukadzi.
Mifananidzo yeBullet Tattoos
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kunyora » Mhando dzematatoo » Zvinhu uye zvinhu nyora » Bullet nyora uye zvadzinoreva zvinotsanangurwa
Iyi ndiyo tattoo pamutsipa waDemi Lovato, akapona!
Tsika dzeAmerican Tattoos: Nhoroondo Pfupi